I-Transparent Polyester Wire yeGreenhouse-Vineyard Wire-Ningbo Judin Special Monofilament Co.,Ltd
Izingxenye Zomsiki Wokuxubha
Intambo yePlastic Baling
Ikhaya>Imikhiqizo>Ipholiyesta Wire>Isivini Wire
Inayiloni Fish Tape
I-Tape Yezinhlanzi Zensimbi
Fiberglass Ikhebula Puller
Izesekeli Zeteyiphu Yezinhlanzi Egoba Intwasahlobo
I-WhatsApp / Wechat / Mob:+ 86 13586680186
Faka: # 3 Ind & Td Road, Jishigang Industrial Park, Isifunda saseYinzhou, Ningbo, 315171, PR China
Transparent Polyester Wire for Abamba Ukushisa
Ubungako beMin.Order: 100 Piece / Piece
Amandla Wokunikezela: Amabhokisi angama-500 ngosuku
Izintambo zeJudin ziyi-monofilaments eklanyelwe ngokukhethekile ukufaka esikhundleni sokusebenzisa izintambo zensimbi ezivamile kanye nocingo ekulimeni, ezolimo, izivini, amasimu ezithelo, isiko elingaphansi kwekhava, ama-wind breakers, izindlu eziluhlaza ( shading and roofing), uthango oluphephile lokufuywa kwezilwane, ikhava yamadamu kanye amachibi, amasiko asolwandle kanye nezinhlobonhlobo zezinye izinhlelo zokusebenza.
Izintambo zeJudin zikhiqizwa ngeNyiloni nePolyester futhi izinzuzo ezizinikezayo zibalwe ngezansi. Umuntu angakhetha phakathi koku-2 ngokusekelwe endaweni yokusetshenziswa. Iningi lezinzuzo ezinikezwa yile migqa ngaphezu kwezintambo zensimbi ezivamile ziyafana ngokuhluka okumbalwa okubenza babe ukukhetha okuthandwayo kwezinhlelo zokusebenza ezithile.
Izintambo ze-Judin zilula kunezintambo zensimbi okwenza ukubamba kube lula kunezintambo zensimbi okuholela ekufakweni okulula nokushesha kakhulu kunezintambo zensimbi.
Uma ucingo lwe-Judin luqiniswe kahle aludingi ukunakekelwa futhi aluqhubeki luncipha ngenxa yesici esiphansi se-PET.
Izintambo ze-Judin zine-UV ephezulu futhi isimo sezulu sizinzile. Ucingo alunciphisi ukusuka ekukhanyeni elangeni futhi aludingi ukunakekelwa ngisho nasezimweni zezulu ezimbi kakhulu.
Enye yezinzuzo eziningi zomugqa ukuzinza kwawo ngokumelene namazinga okushisa aphezulu okuvimbela ukuncibilika kanye nokulimala kwesembozo sefilimu yepulasitiki esetshenziswa ezindlini zokugcina izithombo ukuvimbela ukulimala kwesithwathwa ezitshalweni.
I-Judin wire ayigqwali futhi ayigqwali. I-Judin wire ikhombisa ukumelana okuhle kumakhemikhali nomanyolo futhi ngenxa yalokho ihlala isikhathi eside.
I-Judin wire ayizilimazi izitshalo, izilwane noma indawo ezungezile.
Enye yezinye izinzuzo zokusebenzisa lolu cingo ukuthi alubambi ugesi noma ama-currents okwenza kube enye indlela ephephile uma kwenzeka umbani.
Intambo ye-PET Judin ikhombisa ubude obuphansi kanye namanzi aphansi, umswakama noma ukumunca umswakama okwenza kube intambo ekhethwayo ezinhlelweni eziningi.
IZIqeshana ezincane NOMA IZINTO;
OKUFANELE UKUSETSHENZISWA NOBUCHWEPHESHE OKUSHA;
I-Judin WIRE Specification;
IDAYILI COLOR umthwalo UKUBHALA I-METERAGE
I-Kgs IN % Mtrs/KG
2.2 I-TRANSPARENT 160 17 190
2.5 I-TRANSPARENT 200 17 145
Sicela usibonise imfuneko yakho.
Yiba ngowokuqala ukwazi ngemikhiqizo yethu yakamuva
Ucingo: + 86 574 28829858
Kopisha kwesokudla © 2021 Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd